कहाँ छन् नवयुग श्रेष्ठ? | Hamro Khelkud
कहाँ छन् नवयुग श्रेष्ठ?
काठमाडौँ (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली राष्ट्रिय टोलीका स्टार फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठ गत महिना खेलिएको फिलिपिन्स विरुद्धको एएफसी एसियन कप छनोट चरण अन्तर्गतको टोलीमा अटाएका थिएनन्। त्यसबेला चोटका कारण टोलीमा नपरेपछि उनले त्यसयता विश्राम लिंदै आइरहेका छन्।
फिलिपिन्स विरुद्धको खेलपछि नेपालमै आयोजित घरेलु प्रतियोगितामा पनि नवयुग आर्मीको टोलीमा थिएनन्। नवयुगकै गृहनगर इलाममा आयोजित माइभ्याली गोल्डकपमा आर्मी खेल्दा नवयुग विश्राममा थिए। आर्मीले फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्दा भने नवयुग एन.आर.एन अष्ट्रेलियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिन सिड्नी पुगेका थिए। त्यसयता आर्मीले अन्य प्रतियोगितामा भाग लिएपनि नवयुग भने अष्ट्रेलियामै रहेर विश्राम लिइरहे।
नेपालले आगामी जुन १३ तारिखमा यमनविरुद्ध एएफसी एसियन कपको छनोट चरण अन्तर्गतको दोश्रो खेल खेल्दैछ। उक्त खेलको तयारीका लागि नवयुग नेपाल आइसकेका छन्। चोटपछि राम्रो विश्राम लिएका उनले नेपालले पहिलो खेलमा व्यहोरेको हारलाई बिर्साउने धुनमा हुनेछन्।
त्यसो त यो खेल नवयुगका लागि नेपालमै खेल्ने पहिलो अन्तराष्ट्रिय खेल हुनेछ। यसअघि फ्रेण्डस् अफ जापान नामक टोलीसंग नेपाल एघारले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दा नवयुगले खेले पनि त्यसले अन्तराष्ट्रिय मान्यता भने पाएको थिएन। उक्त खेलमा नेपालका लागि नवयुगले एकमात्र गोल गरेका थिए।